Etazonia: Nisy maty nihinana chloroquine Lehilahy iray no maty nihinana chloroquine tany Etazonia,
Fetin’ny fahaleovantena 2020 : Tsy azon’ny rehetra hatrehina
Hiavaka tsy toy ny isan-taona ny fankalazan’ny Malagasy ny fetim-pirenena amin’ity taona ity noho ny fisian’ny valanaretina covid-19 eto amintsika. Raha eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina hatrany mantsy no mahazatra hankalazana izany lanonana izany isan-taona,
ALAOTRA MANGORO Mpamboly vary miisa 4 000 taraiky any amin’ny faritra hafa
Mpamboly vary miisa 4 000 avy any amin’ny faritra Alaotra mangoro no miparitaka manerana ny Nosy amin’izao fotoana izao. Manao asa any amin’ny faritra hafa ny ankamaroan’izy ireo, ary mihitsoka any amin’izay toerana misy azy avokoa raha tokony hampiaka-bokatra any Alaotra amin’izao fotoana izao,
Alika mpitsongo dia : Nahazo fitaovana vaovao
Fitaovam-piofanana feno sy « panneaux solaire » miisa 4 no natolotra ireo alika mpitsongo dia miisa 29 izay tantanin’ireo Maîtres-chiens miisa 30 mandrafitra ny CRFDC omaly alarobia 27 Mey.
Ambatondrazaka Gadra 4 tafatsoaka ny fonja
Voafonja miisa 04 mirahalahy no tafaporitsaka ny fonjan’Ambatondrazaka omaly alarobia tokony tamin’ny 12 ora sy sasany atoandro.
ANDOHATAPENAKA III Efa tranga mateti-piseho ilay fanariana zaza menavava
Nahitana zaza rano iray nisy nanary tao anatina sachet plastika teny Andohatapenaka III afaka omaly maraina. Teny akaikina
Kamiao tapaka "frein" teny Analamahitsy : Naiditra "fourrière"
Voamarin'ny mpanamarina ara-teknikan'ny ekipan'ny service des opérations et contrôles routiers na SOCR ao anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia fa tsy fietezana teo amin'ny tsindry hisatra tokoa no nahatonga ny loza nitranga tamin'ny fiara be kamiao iray teny Analamahitsy ny 21 mey lasa.
Aviation Civile de Madagascar Nodimandry i James Andrianalisoa
Nodimandry tany Paris ny alakamisy lasa teo i James Andrianalisoa, araka ny tatitra nataon’ny fianakaviany. Fantatra teo amin’ny tontolon’ny fitaterana an’habakabaka raha i James Andrianalisoa ary nanana traikefa iraisam-pirenena momba izany tanteraka.
ho fitsaboana ny Coronavirus nahazo azy. Marary mafy ihany koa ny vadiny amin'izao fotoana.
Ny OMS kosa dia mbola mandrara ny fampiasàna ireo fanafody tsy nanaovana andrana izay vao mainka mety hampidi-doza sy hanafoana ny "stock" eny amin’ny toby fivarotam-panafody fotsiny. Etsy andaniny, taorian'ny fanambarana nataon'ny dokotera frantsay Pr Raoult izao, izay nilaza fa mahomby amin'ny fiadiana amin'ny coronavirus ny chloroquine dia nilaza izy ireo fa ho ampiasainy izany na dia mbola tsy nandalo ny fanandramana farany aza. Rinahsoa